İmaaraatka oo shirkado kala duwan u adeegsada sii hurinta dagaalka Liibiya - Tilmaan Media
İmaaraatka oo shirkado kala duwan u adeegsada sii hurinta dagaalka Liibiya
Warbixin ay qortay shabakadda Aljazeera ayay ku sheegtay in ay heshay xog muujinaysa in dawladda Imaaraatka Carabtu (UAE) ay samaysay buundo hawada ah oo taageero lagu siinayo Generaal Khaliifa Xaftar oo dagaalka kula jira xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya.
Warbixinta ayaa sheegtay in shirkadaha kulugta leh hawshaan sharci darrada ah ay si isdaba joog ah u baddalayeen magacyadooda kadib markii qaar kamid ah magacyadooda kusoo baxeen warbixinno qaramada midoobay soo saartay oo kusaabsan dalalka iyo shirakadaha jabiya cunaqabataynta xagga hubka ee Liibiya saaran tan iyo markii dagaalka sokeeya ka bilawday dalkaas.
Shirkadahaan ayaa qaybtood horay loo ganaaxay qaybtoodna shattiga shaqada lagala laabtay kadib markii ay jabiyeen cunaqabatayno hubka ah oo dalal kale lagu soo rogay. Waxayna si joogta ah ugu xiran yihiin dawladda Imaaraatka Carabta oo u adeegsatta qorshayaasheeda bariga dhexe.
Warbixinta ayaa soo bandhigtay magacyada dhawr shirkadood oo kulug leh dagaalka kasocda Liibiya, waxaa kamid ah shirkadahaas, ZetAvia, Azee Air iyo Jenis Air.
Magacyada shiradahaan ayaa ah kuwa cusub, lkn ay leeyihiin isla dad horay ugu eedaysnaa hurinta colaadaha iyo gaynta hub meelo laga mamnuucay.
Ciidamada dowladda iyo Al-shabaab oo ku dagaallamay Buurdhuubo
Ducaale oo xil ka qaadis ka bad-baaday iyo isbedello ka socda Kenya